patent Amazon files crypto la xidhiidha durdurrada xogta - Blockchain News
Amazon ayaa ku guuleystay patent ah suuqa xogta Streaming ah in loo ogolaan karin in macaamiishu ay u helaan-waqtiga dhabta ah xogta macaamilka cryptocurrency.
patent Amazon ee qeexaya nidaamka ah oo durdurrada xogta shakhsiga ah ma laga yaabaa in si qiimo leh on iyaga u gaar ah, isticmaalaya macluumaadka Seeraar iyo macaamil cryptocurrency tusaale. Weli by isku xogta this macluumaad laga helay ilo dheeraad ah, “durdur xogta waxay noqon karaan kuwo ka badan oo qiimo leh.”
dalalka patent The: “Tusaale ahaan, koox ka mid ah dukaamada elektaroonik ah ama internet aqbala xawaalad Seeraar ayaa laga yaabaa in cinwaanka maraakiibta a laga yaabaa in cinwaanka Seeraar ah qraallo. The dukaano electronic isku cinwaanka maraakiibta la xogta macaamilka Seeraar in la abuuro xog xiran iyo upphandlingstöd.se xogta marka la isku daro sida durdur ah oo xog la isku daray.”
Post Previous:Somailand Caymiska Marsh shaqeeya IBM on boosteejo Blockchain
Post Next:weydaarsiga crypto Korean bilaabaan is dadaal sharciyeynta
furtlino ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 15, 2018 at 12:18 PM